Boot Menu မှာ Windows နှစ်ခု မပေါ်ချင်ဘူး ဆိုရင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Boot Menu မှာ Windows နှစ်ခု မပေါ်ချင်ဘူး ဆိုရင်
Boot Menu မှာ Windows နှစ်ခု မပေါ်ချင်ဘူး ဆိုရင်
By နေမင်းမောင်2:43 PM7 comments
ကျွန်တော် အခု မေးထားတာ တွေကို အတက်နိုင် ဆုံးတော့ ပြန်ဖြေပေး နေပါတယ် .. စာရေးလိုက် ဖြေလိုက်တော့ လုပ်ပေး သွားပါမယ် .. မေးခွန်းတွေ ချည်းပဲ လိုက်ဖြေ နေရရင်လည်း ဘာစာမှ မရေးဖြစ်လောက် တော့မှာ သေချာပါတယ် .. အဲ့ဒါကြောင့် စာရေးလို့ ဖြေလိုက်တော့ လုပ်ပေး သွားပါမယ် .. အခု ကျွန်တော် အကို တစ်ယောက် မေးထားတဲ့ Windows နှစ်ခု တင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ Windows တစ်ခုကို ဖြုတ်ပြီး သွားပေမယ် .. Boot တက်တဲ့ အချိန်ကျရင် Windows တန်းမတက်ပဲ Windows နှစ်ခု ရွေးခိုင်း တာလေးကို Windows တန်းတက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေး သွားပါမယ် .. နည်းလမ်း လေးကတော့ လွယ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့ အသေးစိတ် ရေးပေးသွားပါမယ် ..
အရင်ဆုံး Keyboard မှ Windows logo + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ msconfig လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် System Configuration Box လေး ကျလာပါလိမ့်မယ် ..
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Boot ကို သွားလိုက်ပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တင်ထားတဲ့ Windows အမျိုးအစားတွေကို Boot Setting ထဲမှာ တွေ့ပါလ်ိမ့်မယ် .. ဒီနေရမှာ တစ်ခု သိထားဖို့ လိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဖြုတ်လိုက်တဲ့ Windows က ဘယ် Partation ထဲမှာ ရှိတယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါလ်ိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် ဖြုတ်လိုက်တဲ့ Windows က Partation H: ထဲမှာ တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်က :H ကိုရွေးပြီး Delete ပေးလိုက်ပါတယ် ..
မိမိတို့ ဖြုတ်လိုက်တဲ့ Windows ကိုရွေးပြီး Delete ပေးပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Apply >> OK ပေးလိုက်ယုံပါပဲ ..
အပေါ်က ပုံအတိုင်း Restart ပေးပြီး သွားပြီ လို့ Windows ပြန်တက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အရင်လို ဘယ် Windows ကိုရွေးချယ် မယ်ဆိုတာ မမေးတော့ပဲ တစ်ခါထဲ Windows တန်းတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
max February 27, 2012 at 6:38 PM
ကျေဇူးတင်ပါတယ်... အကို ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ။
Anonymous February 28, 2012 at 5:46 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို အောင်မြင်ပါစေဗျာ...
Anonymous March 2, 2012 at 3:40 PM
ကျေးဇူး ပါဘဲဗျာ... အောင်မြင်ပါစေ... ဒီ့ထက်ပိုပီး... :)
leo May 27, 2012 at 9:42 PM
Bro if when i start up my pc, there is asking any staring up time,appear black screen with letters,open in Normal Mode or Safe Mode (it's seem like press F8 or F11 when start up time),so how can i solve that? Please
maythandarwin January 21, 2013 at 11:46 PM
အကို ကျွန်တော် window က window7 နဲ့windoe loader EX လို့ပေါ်နေတယ် အကိုပြောသလို လုပ်တာ လဲ window က တစ်ခုဘဲ ပေါ်နေတယ်.....ကူညီပါ အုံးလား အကို။။။။။။။။။။။ကျေးဇူးတင် ပါတယ်...
maythandarwin January 21, 2013 at 11:49 PM
maythandarwin January 21, 2013 at 11:50 PM
Antamedia Hotspot 1.4.6 + Crack
ISA Sever 2006 အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
Xilisoft Video Converter Ultimate 7.0.1 + Key ထည်...
Windows7SP1 5in1+4in1 english (x86/x64) 15.02.20...
အင်တာနက် ဂျာနယ် ( အတွဲ ၁၃ ၊ အမှတ် ၈ )
Internet Download Manager 6.09 Build3+ Crack
Photoshop CS5 ( Update Link )
Windows Media Player Error ဖြေရှင်းနည်း
ဟက်ကာ လက်စွဲ ( မြန်မာပြန် ) ( E-Book )
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပြသနာ ဖြေရှ...
ကွန်ပျူတာ ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်ဆေး ( E-Book )
Facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ( E-Book )
A Dictionary and Phrasebook of French Medical Term...
Valentine Skin Pack 1.0 for Windows7(x32/x64)
WinISO Standard v6.1.0.4423
CoolwareMax WebcamMax v7.5.9.6 Incl. Keygen and Pa...
Hardware information နှင့် Slot လွတ်ခြင်းမလွတ်ကြည်...
(Untouched ) Copy လား ?? ( Touched ) Copy လား ??
Photoshop Plugin Collections
Window Offline Update လုပ်ဆောင်ခြင်း
Laptop ၀ယ်ရာတွင် သိရမည့်အချက်များ ( အပိုင်း ၂ )
Laptop ၀ယ်ရာတွင် သိရမည့်အချက်များ ( အပိုင်း ၁)
Hide and Change Ip address with Firefox
hardisk create partion parts on window
ဘုရားဖြစ်တော်မူသည့် ဗုဒ္ဓ၀င် အကျဉ်းနှင့် ပုံတော်မျာ...
Objective General English (10000 Plus Questions)
Basic College Mathematics, 4th Edition
Apple Hacks First Edition
PC Magazine ( 75 Best IPhone Apps)